Dhakhtar ku eedeysan in Mareykanka uu ka caawiyey in la helo hogaamiyihii al-Qaacida oo… – Hagaag.com
Dhakhtar ku eedeysan in Mareykanka uu ka caawiyey in la helo hogaamiyihii al-Qaacida oo…
Posted on 10 Oktoobar 2019 by Admin in World // 0 Comments
Maxkamad ku taal dalka Pakistan ayaa lagu wadaa in ay billowdo dhageysiga racfaan la doonayo in xabsiga looga sii daayo dhakhtar ku eedeysan in Mareykanka uu ka caawiyay in uu dilo hoggaamiyihii Al-Qaacida Osama Bin Laden.
Maadaama uu ahaa shaqaale dowladeed, waxa uu billaabay mashruuc dadka looga tallaalayo cudurka cagaarshowga. Meelaha uu mashruucaasi ka fulinayay waxaa ka mid aheyd magaalada ay ciidamadu deggan yihiin ee Abbottabad, halkaasi oo markii dambe ay caddaatay in Bin Laden uu ku noolaa oo ay ciidamadu ka war qabeen.
Qorshaha mukhaabaraadka Mareykanka ayaa ahaa in ay baaraan hidasidaha mid ka mid ah carruurta ku nool gudaha magaalada Abbottabad si baaritaankaasi loogu ogaado in ay ehel la yihiin Bin Laden iyo in kale.
Waxaa la rumeysan yahay in mid ka mid ah hawlwadeennada la shaqeeya Dr Afridi uu booqday guriga uu deganaa Bin Laden oo uu cannug ka soo qaaday dhiig balse lama xaqiijin karayo in dhiigaasi uu sahlay in mukhaabaraadka Mareykanka ay ogaadaan in Osama uu halkaasi ku nool yahay iyo in kale.